Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 10)
Kala duwanaanta 'Redmi Note' waxay dhaaftay 100 milyan oo unug oo la iibiyey
Raadi wax badan oo ku saabsan iibka caalamiga ah ee 'Redmi Note range' oo guul u ahaa Xiaomi tan iyo markii ay suuqa gashay.
Taageerayaasha Jackson Yee iyo waxqabadka sare, Nova 5 Pro wuxuu heli doonaa daabacaad gaar ah
Huawei si ay u bilawdo nuqul xaddidan oo ka mid ah shirkadda caanka ah ee Huawei Nova 5 Pro; wuxuu ku saabsan yahay jilaaga Shiinaha iyo heesaaga Jackson Yee.
Sawirro sifeeysan oo ka socda Huawei MediaPad M7
Soo hel sawirrada ugu horreeya ee MediaPad M7, kiniinka cusub ee Huawei oo si rasmi ah loogu soo bandhigi karo dhowr saacadood gudahood.
Shaandheeyey qeexitaanka Xiaomi CC9 Pro
Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaanka Xiaomi CC9 Pro, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee dhexdhexaadka ah ee dhowaan suuqa soo geli doona.
Sony waxay xaqiijineysaa taleefannada ay yeelan doonaan Android 10
Raadi wax badan oo ku saabsan liiska taleefannada Sony ee marin u heli doona Android 10 sida shirkaddu horeyba si rasmi ah u xaqiijisay.
Google wuxuu isku dayay inuu cadeeyo sababta Pixel 4 cusub uusan awood ugu lahayn inuu wax ku qoro 60 fps oo ah 4k tayo leh.
OnePlus 6 iyo 6T waxay ku helaan barnaamijka 'Android 10 beta' iyada oo loo marayo cusbooneysiin cusub oo OTA ah
OnePlus wuxuu sii deynayaa horudhaca Android 10 ee hoosta OxygenOS ee calaamadaha OnePlus 6 iyo 6T adduunka.
Samsung waxay ku macasalaameyneysaa desktop-ka Linux qalabkiisa gacanta
Samsung ayaa si rasmi ah u shaacisay inay hoos u dhigeyso mashruuca Linux loogu keenayo taleefannada casriga ah ee shirkadda iyada oo loo marayo Linux-ka Dex.
Nokia waxay xareysaa wax ka badan 2.000 shatiyada la xiriira
Raadi wax badan oo ku saabsan tirada badan ee shatiyadaha Nokia ee la xiriira 5G oo ah mid ka mid ah noocyada ugu firfircoon arimahan.
HTC waxay soo bandhigaysaa taleefankeeda cusub ee xannibaadda Baxniintii 1aad
Ka ogow dhammaan waxyaabaha ku saabsan HTC Exodus 1s, taleefanka cusub ee xannibista calaamadaha ee si rasmi ah loogu bilaabay bogga shirkadda.
Shaandheeyey naqshadda ciyaarta Moto E6
Ka ogow wax badan oo ku saabsan naqshadeynta Moto E6 Play, taleefanka cusub ee ku jira qaybta hoose ee Motorola ee dhawaan suuqa soo geli doona.
Samsung oo leh kamarad shaashad hoose ayaa imaan doonta bilawga sanadka
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha Samsung ee ah inay soo saaraan taleefankan kamarad ah oo aan la soo bandhigi karin horraanta sannadka 2020, kaasoo rasmi ahaan rasmi u noqon doona dhawaan
Huawei Nova 5Z ayaa dhawaan la soo saari doonaa
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bandhigga rasmiga ah ee Huawei Nova 5Z, taleefanka cusub ee khadka dhexe ee dhexe ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee imaan doonta Isniintaan.
Huawei waxay ka gorgortameysaa inay iibiso 5G-ga shirkadaha Mareykanka
Wax badan ka ogow wadaxaajoodka shirkadda 'Huawei' ee ah inay iibin karto shatiyadeeda 5G dhowr shirkadood oo Mareykan ah waxyar.
OnePlus 5G taleefannada casriga ah ee laba-nooc ah oo la soo saari doono dhammaadka sanadkan
Liu Zuohu, oo ah aasaasaha iyo agaasimaha guud ee shirkadda Plus, ayaa wareysi uu bixiyay ku sheegay in taleefanka gacanta ee 5G-ka ah oo laba-qaab ah ay soo saareyso shirkadda soo saarta dhammaadka sanadkan.
Taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee leh Snapdragon 865 ayaa lagu dhawaaqay, waana 8848 Titanium M6 5G
8848 Titanium M6 5G waa kii ugu horreeyay ee processor processor Snapdragon 865 ah ee lagu dhawaaqo. Waxay imaan doontaa horaanta 2020.
Huawei Raaxo 10: Nooca cusub ee bartamaha
Raadi wax kasta oo ku saabsan Huawei raaxeysiga 10, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee horayba loo soo bandhigay.
ZTE Blade 20 Smart: Taleefanka cusub ee shirkaddu waa rasmi
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan ZTE Blade 20 Smart, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee horay loo soo bandhigay.
Motorola RAZR horeyba waxay u laheyd taariikh soo bandhigid ah
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bandhigga rasmiga ah ee Motorola RAZR oo ay horay u xaqiijisay shirkadda lafteeda oo rasmi ahaan u noqon doonta bil kadib.
300 milyan oo 5G oo casri ah ayaa la iibinayaa 2020, TSMC ayaa saadaalisay
Sida laga soo xigtay warbixin qarsoodi ah oo ka timid TSCM, isla saadaashaan in 2020 5G iibinta mobilada ay u taagan tahay tiro dhan 300 milyan oo unug.
Bixinta ugu horreysa ee waxa OnePlus 8 Pro u ekaan karo
Waxaan ku tusineynaa jawaabihii ugu horreeyay ee waxa OnePlus 8 Pro u ekaan karo, qalab baabi'inaya kamaradda qalabka lagala noqon karo.
Aqoonsiga wajiga Pixel 4 wuxuu shaqeeyaa xitaa iyadoo indhahaagu xiran yihiin
Tikniyoolajiyadda aqoonsiga wajiga Pixel 4 ayaa kuu oggolaanaya inaad furto taleefankaaga xitaa iyadoo indhahaagu xiran yihiin, waana muuqaal naafo ah.
Waa maxay taleefannada gacanta iyo kiniinnada ku habboon Google Stadia?
Ka ogow wax badan oo ku saabsan mobilada iyo kiniiniyada la jaan qaadi kara Google Stadia illaa iyo hadda, oo ay si rasmi ah u xaqiijisay Google.
Samsung ayaa bilaabi doonta taleefan kamarad shaashad hoosaadkiisu yahay 2020
Ka ogow wax badan oo ku saabsan qorshayaasha sumcadda Kuuriya inay soo saarto taleefan kamarad shaashadda hoostiisa ku jira sannadka 2020, in kasta oo Samsung aysan weli waxba xaqiijin.
OPPO Reno2 iyo OPPO Reno2 Z waxaa laga bilaabay Spain
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bilawga rasmiga ah ee Isbaanishka ee OPPO Reno2 iyo Reno2 Z, taleefannada cusub ee dhexe ee noocyada Shiinaha.
Iibka Huawei wuxuu kordhay 26% illaa iyo sanadkaan
Raadi wax badan oo ku saabsan iibka Huawei illaa iyo sanadkaan, kaas oo horey u iibiyay 185 milyan oo telefoonno ah kana badnaan doona tirakoobkii sanadkii hore.
Galaxy M30s ayaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Ka ogow waxbadan oo ku saabsan daahfurka Galaxy M30s, Samsung ee bartamaha-dhexe, si rasmi ah Spain halka aad hadda ka iibsan karto.
Nokia 8.2 oo leh 5G taageero iyo Snapdragon 735 ayaa ku imanaya saddex nooc oo RAM ah
Warbixin cusub oo si qarsoodi ah u soo baxday ayaa muujineysa in Nokia 8.2 lagu heli doono saddex nooc oo xusuusta iyo keydinta gudaha ah.
Maamuusku wuxuu bilaabmayaa sixirka UI 3.0 Diiwaangelinta Beta Dadweynaha ee Maamuusta 20 iyo 20 Pro; muuqaalada sidoo kale shaaca ka qaaday
Sixirka UI 3.0 ayaa imanaya. Kuwa ugu horreeya ee hela waxay noqon doonaan Honor 20 iyo 20 Pro, waxaanan horey u soo taxnay qaar ka mid ah wararka ay ku faani karaan.
Oppo Reno 10X Zoom Wuxuu Bilaabayaa Qorista Isticmaalayaasha Android 10 Beta Test
Oppo Reno 10X Zoom wuxuu heli doonaa beta-ka Android 10 maalmaha soo socda oo adeegsadayaal yar ayaa awoodi doona inay ku raaxaystaan ​​in ka badan kuwa kale.
Sanduuqa tafaariiqda ee Xiaomi Mi Note 10 ayaa u muuqda inuu xaqiijinayo jiritaankiisa
Sanduuqa tafaariiqda ee Xiaomi Mi Note 10 ayaa u muuqday isagoo xaqiijinaya jiritaankiisa iyo inuu aad ugu dhow yahay suuq geynta.
IQOO Neo Pro wuxuu soo maray AnTuTu oo leh Snapdragon 855 hoostiisa
IQOO Pro Neo wuxuu soo maray gacmaha AnTuTu si loo diiwaan geliyo dhibic kama dambeys ah oo u qalantaa taleefan casri ah oo leh Snapdragon 855.
Motorola Moto G8 taariikhda sii deynta iyo naqshadeynta ayaa la muujiyay
Motorola Moto G8 ayaa ka soo muuqday sawiradooda oo ah taleefan kamarad gadaal oo seddex laab ah. Taariikhda ay soo saarayso ayaa la shaaciyey.
Redmi 8 wuxuu ku ciyaari karaa 17 saacadood oo fiidiyoow hal mar ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan ismaamulka Redmi 8 kaas oo awoodi doona inuu ciyaaro ilaa 17 saacadood oo fiidiyoow ah adigoon istaagin sida sumaddu horay u sheegtay.
Furitaankii ugu horreeyay ee Huawei Mate X wuxuu noo ogolaanayaa inaan aragno qaabkiisa cusub
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan sanduuqan aan la shaacin ee laga helay Huawei Mate X kaas oo aan ku arki karno naqshadda cusub ee taleefankan kamaraddeeda dheeriga ah.
Xiaomi wuxuu shaaca ka qaadaa taariikhda cusbooneysiinta MIUI 11 ee taleefannada kala duwan
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhaha MIUI 11 si aad uhesho taleefannada kala duwan ee Xiaomi, Redmi iyo Pocophone oo sumaddu mar hore si rasmi ah u xaqiijisay.
Dhamaan wararkii Google soo bandhigay shalay Pixel 4
Haddii aad rabto inaad ogaato waa maxay dhammaan wararka ay Google soo bandhigtay oo ay la socdaan Pixel 4 iyo Pixel 4 XL, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhrinta maqaalkan.
Barnaamijka beta ee Android 10 ee LG wuxuu bilaaban doonaa dhamaadka bisha Oktoobar dhowr taleefan oo casri ahna waa ladiray.
LG ayaa ku dhawaaqday in beta-ka Android 10 uu gaari doono dhowr ka mid ah taleefannadiisa gacanta iyadoo ay ugu wacan tahay barnaamijka horudhaca ah ee uu bilaabi doono dhammaadka Oktoobar.
IQOO Lite wuxuu soo maray gacmaha AnTuTu si uu u muujiyo dhowr qeexitaankiisa iyo waxqabadkiisa
IQOO Lite wuxuu noqon doonaa taleefan casri ah oo heer sare ah oo la imaan doona Snapdragon 855 wuxuuna soo maray barxadda tijaabada AnTuTu.
Huawei Enjoy 10 ayaa la soo bandhigi doonaa toddobaadkan
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bandhigga rasmiga ah ee Huawei Enjoy 10 oo ka mid ah sumcadda Shiinaha ee toddobaadkan ka bilaabmaya Shiinaha waxayna ku guuleysan doontaa iibka.
Huawei Nova 5T-dhamaadka sare ayaa loo soo bandhigi doonaa dhammaan Yurub bisha Nofeembar
Huawei Nova 5T wuxuu imaan doonaa dhammaan Yurub iyo Boqortooyada Ingiriiska bisha Nofeembar, sida ku xusan ku dhawaaqista shirkadda Shiinaha ay hadda sameysay.
Honor 9X wuxuu horey u leeyahay taariikhda soo bandhigida Yurub
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soo bandhigida rasmiga ah ee Honor 9X ee Yurub sida horeyba loogu dhawaaqay astaanta qaban doonta laba dhacdo oo kala duwan.
Realme 5 Pro waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bilaabista rasmiga ah ee 'Realme 5 Pro' ee Isbanishka, taleefanka cusub ee nooca dhexdhexaadka ah ayaa hadda rasmi ah.
Cusboonaysiinta amniga Oktoobar ee Galaxy S9 hadda waa la heli karaa
Cusboonaysiinta amniga ee Galaxy S9 iyo S9 + ayaa hadda loo heli karaa soo dejin waxayna diiradda saareysaa hagaajinta arrimaha amniga ee ay ogaatay Project Zero
Pixelbook Go, Google-ka cusub ee Googlebook wuxuu doonayaa inuu istaago oogada
Dhammaan faahfaahinta Pixelbook Go, laptop-ka cusub ee Google-ka ee loo yaqaan 'Chromebook' oo u imanaya inuu istaago oogada iyo MacBook Air. Ma guuleysan doontaa?
Google Nest Mini horeyba waa rasmi, oo leh naqshad joogto ah laakiin gudaha lalayaabay
Dhamaan faahfaahinta Google Nest Mini, kuhadalka smart smart ee Google ee la yimaada naqshada deegaanka iyo shaqooyinka cusub.
Ka raadi wax walba oo ku saabsan OPPO A11, taleefanka nooca dhexe ee nooc ee cusub oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay lagana bilaabay Shiinaha.
Taleefanka casriga ah ee loo yaqaan 'Realme X2 Pro' oo wata Snapdragon 855 Plus ayaa hadda rasmi ah. Ogow dhammaan astaamaheeda, qeexitaannada farsamo iyo qiimayaasha.
Wax ka yar bil ayaa Vivo Z1X laga bilaabay suuqa adduunka. Bilowga ...
Huawei Mate X horeyba waa loo soo saaray
Huawei Mate X wuxuu durbaba ku jiraa wax soo saar ballaaran ka hor inta aan la bilaabin Shiinaha bishaan oo wuxuu sugayaa bilaabitaankiisa caalamiga ah deyrtan.
Redmi K30 wuxuu la imaan doonaa taageero buuxda 5G
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xaqiijinta in Redmi K30s ay taageero buuxda u heli doonaan 5G SA iyo NSA sida ay ka leeyihiin shirkadda lafteeda.
TCL Plex waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Ka ogow wax dheeraad ah oo ku saabsan bilowga rasmiga ah ee Isbayn ee nooca 'TCL Plex', oo ah taleefankii ugu horreeyay ee magaciisa hoos yimaada ee lagu soo bandhigo IFA.
Laba taleefan oo Hisense ah oo wata kamaradaha afar geesoodka ah ayaa diyaar u ah in la furo
Hisense ayaa ka diiwaan galisay laba casriga casriga ah ee kamaradaha afar geesoodka ah 'TENAA platform'. Waxay bilaabi doonaan dhowaan!
Telefoonada Huawei ee mustaqbalka waxay noqon doonaan labalaab: waxay soo bandhigi doonaan HarmonyOS iyo Android
Waxay umuuqataa in shirkada weyn ee Shiinaha ay rabto inaan si tartiib tartiib ah ula qabsano Harmony OS. Sababtaas awgeed, waxaan ognahay in taleefannada Huawei ay noqon doonaan labalaab.
Samsung ayaa hadda ku dhawaaqday daahfurka beta-kii ugu horreeyay ee One UI 2.0 oo loogu talagalay dhammaan noocyada Galaxy S10, oo ah nooc ka kooban 4 terminaal.
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan jiritaanka Vivo IQOO Neo 2 oo horey u soo maray Geekbench isla markaana dhowaan gaari kara suuqa si rasmi ah.
Fold Galaxy ayaa lagu kala jarjaray fiidiyowga si loo hubiyo jiritaankiisa
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan fiidiyowgan oo Galaxy Fold gebi ahaanba la jarjaray, kaas oo noo oggolaanaya inaan wax badan ka aragno farsamooyinka taleefanka.
Samsung sidoo kale waxay soo saari laheyd Galaxy S10 Lite
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soo saarista astaanta Kuuriyaanka ee 'Galaxy S10 Lite' oo si rasmi ah dhowaan loo bilaabi doono.
OnePlus 7 iyo 7 Pro waxay helayaan cusbooneysiinta OxygenOS Open Beta 3 oo ku saleysan Android 10
OnePlus 7 iyo 7Pro waxay helayaan cusboonaysiin cusub oo ah qaab beta ah iyo iyada oo loo yaqaan 'Android Pie' taas oo ku dareysa horumarin iyo warar badan
Gionee wuxuu ka diiwaan galiyay laba taleefan oo casri ah TENAA si loo bartilmaameedsado qaybta udhaxeysa
Gionee ayaa dhawaan suuqa ka bilaabi doonta laba taleefan oo cusub oo kuwa dhexe ah, sida ku cad liistada ka soo muuqatay TENAA.
HarmonyOS ee nidaamka hawlgalka mobilada si uu ula tartamo macruufka Apple wax ka yar laba sano
Aasaasaha Huawei wuxuu sheegay inuu rumeysan yahay inay shirkaddu horumarin karto HarmonyOS oo ay ka dhigi karto mid la tartamaya macruufka wax ka yar laba sano.
Tani waa qiimaha Meizu 16T ee lagu dhajiyay dukaanka internetka kahor intaan la bilaabin
Oktoobar 23 ee soo socota waa taariikhda Meizu 16T laga bilaabi doono Shiinaha, ka hor intaanay dhicin, qiimaheeda ayaa soo muuqday.
MIUI 11 wuxuu bilaabayaa telefoonnadii ugu horreeyay ee Xiaomi
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan cusbooneysiinta MIUI 11 oo horeyba u gaaray dhowr taleefannada Xiaomi iyo Redmi si rasmi ah kahor intaadan imaan Yurub.
Huawei Mate 20 Pro wuxuu soo dhaweynayaa EMUI 10 oo leh Android Pie
EMIU 10 oo ay weheliso Android 10 waxay bilaabaysaa in loo qaybiyo Huawei Mate 20 Pro iyada oo loo marayo cusbooneysiin cusub oo software ah.
Cusboonaysiinta Android 10 ee OnePlus 7 iyo 7 Pro ayaa dib u bilaabmaya
Raadi wax badan oo ku saabsan dib u cusbooneysiinta cusbooneysiinta ee Android 10 ee loogu talagalay OnePlus 7 iyo 7 Pro ka dib markii aad dhibaatooyin dhowr ah toddobaadyadan la kulantay.
Galaxy Note 10 Lite ayaa noqon doonta Samsung Galaxy raqiis ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan xaqiijinta in taleefankani uu noqon doono Galaxy Note 10 Lite oo ka socda astaanta Kuuriya ee dhowaan suuqa soo galaysa.
Samsung waxay rajeyneysaa hoos u dhac dheeraad ah natiijooyinkeeda seddexdii biloodba mar
Raadi wax badan oo ku saabsan saadaasha Samsung ee ay aaminsan tahay inay yeelan doonto natiijooyin maaliyadeed oo aan ugu fiicnaan doonin kiiskan.
Shaandheeyey qeexitaannada ugu horreeya ee Galaxy A91
Soo ogow qeexitaannada ugu horreeya ee horay looga sii daayay Galaxy A91, taleefanka soo socda ee Samsung ee suuqa soo gali doona sannadka 2020.
Shirkadda Huawei ayaa soo bandhigi doonta taleefan cusub usbuuca soo socda
Ka ogow wax badan oo ku saabsan taleefanka cusub ee ay Huawei soo bandhigeyso kaas oo nooga tagi doona qalab bilaa xayndaabyo ah iyo qaddarin dhacdooyin ka dhacaya Paris.
Nokia 8.2 wuxuu la imaan lahaa 5G wuxuuna imaan lahaa MWC 2020
Raadi wax badan oo ku saabsan wararka xanta ah ee sheegaya in Nokia 8.2 si rasmi ah loogu soo bandhigi doono MWC 2020 iyo inuu yeelan doono 5G asal ahaan.
ZTE Blade A7s: Taleefanka cusub ee sumcadda Shiinaha
Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan noocyada cusub ee soo gelitaanka shirkadda, ZTE Blade A7s, oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay Shiinaha dhacdo.
Xiaomi Mi Note 10 wuxuu bilaabmi lahaa dhammaadka Oktoobar
Macluumaad cusub oo la helay wuxuu muujinayaa in Xiaomi Mi Note 10 la bilaabi doono dhamaadka Oktoobar oo ah mobiil waxqabad sare leh.
Nolosha Dijitaalka ah iyo Qalabka Amniga ee Ugu Dambeeya waxay ku imaanayaan Realme X iyadoo loo marayo Cusboonaysiin Cusub
Waxqabadka sare ee dhexdhexaadka ah ee Realme X wuxuu helayaa cusbooneysiin cusub oo softiweer ah oo la socota warar, hagaajin iyo horumarin.
Kuwani waa dhammaan wararka One UI 2.0 Android 10 keenaya beta-ka ugu horreeya ee Galaxy S10
Waxaan horeyba u haysannay liiska hal warka UI 2.0 ee beta-kii ugu horreeyay ee soo gaadhay Galaxy S10 maalmahan. Hagaajinta leh Android 10.
Sharafta V30 Pro waa la arkay: sawirradii ugu horreeyay ee rasmi ah ayaa xaday
Sawirradii ugu horreeyay ee saxaafadda ayaa lasaaray oo muujinaya sida naqshadda 'Honor V30 Pro' ay tahay. Waxaan kuu sheegi doonnaa dhammaan faahfaahinta.
Kuwani waa qiimaha rasmiga ah ee lagu dhawaaqay ee Nubia Red Magic 3S ee suuqyada adduunka
Nubia waxay ku dhawaaqday qiimaha rasmiga ah ee Nubia Red Magic 3S ee suuqyada adduunka. Waxaan halkan si qoto dheer ugu faahfaahinaynaa!
Hadda waa waqtigii ugu fiicnaa ee laga iibsado iibka jaban ee OnePlus 7 ee Amazon!
Hadda, waa waqtiga ugu fiican ee la iibsado Buy OnePlus 7 oo raqiis ah. Hadana waxa weeye, shirkada weyn ee Aasiya ayaa hoos u dhigtay qiimaha calankeeda Amazon.
OnePlus 7T Pro iyo OnePlus 7T waxay si rasmi ah Spain u yimaadeen
OnePlus ayaa ku dhawaaqay OnePlus 7T iyo 7T Pro cusub ee Yurub iyo Isbaanish. Dabcan, daabacaadda McLaren ee OnePlus 7T Pro sidoo kale waa lagu daray.
Nooca caalamiga ah ee MIUI 11 wuxuu leeyahay taariikh sii-deyn ah
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda la sii deynayo nooca caalamiga ah ee MIUI 11 maaddaama magaca Shiinaha laftiisu horeyba ugu dhawaaqay shabakadaha bulshada.
Nubia Red Magic 3S waxaa si rasmi ah looga bilaabay Yurub
Raadi wax badan oo ku saabsan bilawga rasmiga ah ee Yurub ee Nubia Red Magic 3S, taleefanka cusub ee ciyaaraha ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee timaadda toddobaadkan.
OPPO Reno Ace: Moobaylka ugu lacagta badan adduunka
Soo ogow wax walba oo ku saabsan OPPO Reno Ace, taleefanka cusub ee dhamaadka sare ee laga helo nooca Shiinaha ee leh kan ugu dhaqsaha badan uguna dhaqsa badan adduunka haddana waa rasmi.
Cusboonaysiinta muddada dheer la sugayay ee OnePlus 7 Pro ayaa halkan ah waxayna na siisaa warar aad u yar oo ku saabsan qaabka ay bedeshay.
Halbeegga 'AnTuTu benchmark' wuxuu noo keenayaa qiimeynta 10-ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan Sebtember 2019. Waxaan halkaan kugu tusaynaa!
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan falanqeyntan Huawei Watch GT 2 ee sumadda Shiinaha oo aan awoodnay inaan tijaabino toddobaadyadan waxaanan kuu daynaynaa ra'yigeenna ku saabsan.
Samsung waxay dib u dhigeysaa daahfurka beta-kii ugu horreeyay ee UI 2.0 ee Galaxy S10
Jebinta arrimaha ku saabsan Android 10 beta ee Samsung ee UI 2.0 qaabeynta qaabeynta ayaa ku qasbay shirkadda inay dib u dhigto daah-furkeeda.
OPPO K5: Nooca cusub ee bartamaha kala duwan ayaa rasmi ah
Raadi wax kasta oo ku saabsan OPPO K5, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee horay loogu soo bandhigay si dhakhso ahna u imanaya suuqa.
3 sababood oo loo iibsado Black Shark 2 Pro, oo hadda laga heli karo Spain
Hadda waxaad ka iibsan kartaa Black Shark 2 Pro gudaha Spain. Laakiin ma mudan tahay in la qabto? Waxaan ku siineynaa sababaha ay hubaal u tahay.
Oppo Reno A, taleefankii cusbaa ee laga bilaabay Japan ee loo yaqaan 'Snapdragon 710'
Oppo Reno A waa taleefan cusub oo laga bilaabay Japan. Ogow dhammaan astaamaheeda, qeexitaankiisa farsamo iyo faahfaahinta qiimaha!
Huawei ayaa ugu sarreeya liiska heerarka haynta taleefannada gacanta ee Shiinaha, laakiin Xiaomi ayaa ku badan
Sida laga soo xigtay daraasad cusub, Huawei ayaa ugu sarreeya liiska heerarka haynta taleefannada gacanta ee Shiinaha, laakiin Xiaomi ayaa ku badan.
Xaraashay qiimaha rasmiga ah ee OnePlus 7T, ma u qalantaa iibsigaaga?
Qiimaha OnePlus 7T waa la xaday, waa taleefan heer sare ah oo heer sare ah si loo bixiyo dilaa calanka cagaaran. Oo waxaa jiri doona McLaren Edition!
Google waxay soo bandhigi kartaa Pixel 4 oo leh 5G usbuuca soo socda
Waxbadan ka ogow wararka xanta ah ee sheegaya in Google si rasmi ah u soo bandhigi doono Pixel 4 oo leh 5G usbuuca soo socda magaalada New York.
Nokia 8.1 wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta Android 10
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan cusbooneysiinta Android 10 oo horeyba si rasmi ah loogu bilaabay Nokia 8.1, oo ah kan ugu horreeya ee summadaha cusboonaysiinta.
Redmi K20 iyo Redmi 7 waxay ku helayaan cusbooneysiin MIUI 11 Shiinaha ah
Redmi K20 iyo Redmi 7 waxay helayaan cusbooneysiinta MIUI 11 qaabkeeda deggan ee Shiinaha, sida ay sheegayaan warbixinno cusub.
Galaxy Note 10 horeyba waxay u leedahay qaab mugdi ah labadaba Instagram iyo Google Play Store
Habka mugdiga ayaa ka dhigaya joogitaankiisa labada instagram iyo Google Play ee loogu talagalay Galaxy Note 10. Habka mugdiga ah ee u muuqda mid cabsi ku leh Instagram.
Redmi 8: Noocyada soo gelitaanka cusub ee shirkaddu waa rasmi
Soo ogow wax walba oo ku saabsan Redmi 8, taleefanka cusub ee ku dhex jira noocyada laga soo galo ee nooca Shiinaha ee horay loogu soo bandhigay Hindiya.
Motorola One Macro: Xadka dhexe ee cusub ee sawir qaadista
Soo ogow wax kasta oo ku saabsan Motorola One Macro, oo ah bartamaha cusub ee shirkadda loogu talagalay in lagu sawiro sawir-qaadista kiiskan waana mid rasmi ah dalka Hindiya.
Galaxy A30s ayaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Raadi wax badan oo ku saabsan daahfurka Galaxy A30s si rasmi ah Spain sida Samsung lafteeda ay ku dhawaaqday kiiskan horeyba.
Sharp S7: Qadka dhexe ee cusub ee leh 'Android One'
Ka raadi wax kasta oo ku saabsan Sharp S7, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee leh 'Android One' oo si rasmi ah loogu soo bandhigay Japan.
Dhowr qeexitaanno muhiim ah iyo qiimaha taxanaha Honor V30 ayaa la muujiyay
Waxaan ku soo dhowaaneynaa la kulanka taxanaha cusub ee loo yaqaan 'Honor V30' oo ka socda shirkadda 'Huawei' sub-brand. Waa…
OnePlus 7T Pro wuxuu yeelan doonaa daabacaad gaar ah oo loo yaqaan 'McLaren'
Soo saaraha Aasiya OnePlus si uu u soo saaro nooc gaar ah oo ah OnePlus 7T Pro oo hoos imanaya sumadda samaynta baabuurta isboortiga McLaren
TENAA waxay liis garaysaa dhowr astaamaha iyo tilmaamaha Realme X2 Pro
TENAA waxay liis garaysay dhowr ka mid ah astaamaha waaweyn iyo tilmaamaha farsamo ee muuqaalka Realme X2 Pro ee keydkeeda.
Waxyaabaha u fududee odayaashaada: si aad ugu hawlgeliso qaabka fudud ee Huawei
Ma waxaad siin doontaa taleefan shiineys ah awooweyaashaa? Ka faa'iideyso tabahaan 'Huawei': dhaqaaji qaabka fudud si ay wax ugu fududaato.
Madaxweyne ku xigeenka Oppo ayaa shaaca ka qaaday dhowr ka mid ah tilmaamaha muhiimka ah ee Oppo Reno Ace
Waxaan dhawaan ka hadalnay Oppo Reno Ace GUNDAM Edition, oo ah nooc sare oo si wadajir ah loo bilaabi karo Oppo Reno ...
EMUI 10 beta ayaa horeyba looga hirgaliyay Huawei Enjoy 10 Plus, Nova 4e iyo Mate 20 Lite
Huawei Enjoy 10 Plus, Nova 4e iyo Mate 20 Lite waxay ku helayaan EMUI 10 beta qaab xiran Shiinaha, sida ay sheegayaan wararka qaar.
Huawei Nova 5T waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bilaabista rasmiga ah ee Spain ee Huawei Nova 5T ee sumadda Shiinaha sida shirkadda ugu dhawaaqday shabakadaha bulshada.
Realme X2 Pro waxay horey u laheyd taariikhda soo bandhigida Yurub
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida rasmiga ah ee Realme X2 Pro ee magaalada Madrid maadaama shirkadda lafteeda si rasmi ah u shaacisay.
Sony Xperia 8: Nooca cusub ee bartamaha
Raadi wax walba oo ku saabsan Sony Xperia 8, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee laga helo nooca Japan oo horeyba si rasmi ah loo soo bandhigay.
Oppo Reno Ace GUNDAM Edition, waa taleefan kale oo soo socda oo Oppo uu bilaabi doono Oktoobar 10
Oppo Reno Ace GUNDAM Edition waa taleefan kale oo casri ah oo tayo sare leh oo soo socda oo shirkadda Shiinaha laga hirgelin doono 10-ka Oktoobar.
Huawei Mate 30 Pro wuxuu helaa dhowr kamarad iyo fiidiyooyin fiidiyoow ah iyada oo loo marayo cusbooneysiin cusub
Huawei Mate 30 Pro wuxuu helayaa cusbooneysi cusub oo software ah oo ku daraya dhowr waxyaabood oo kamarad iyo fiidiyoow ah.
Maamulaha guud ee shirkadda HTC ayaa qiray in shirkaddu joojisay hal-abuurnimada casriga ah
Wareysi uu dhawaan bixiyay, madaxa cusub ee shirkadda HTC Yves Maitres wuxuu qirtay in taleefanka sameeyaha ee reer Taiwan uu joojiyay cusbooneysiinta casriga.
Tani waa qiimaha Oppo K5, oo ah shirkadda bartamaha soo socota
Qiimaha Oppo K5, oo ah taleefan casri ah oo dhexdhexaad ah, ayaa la kashifay ka hor bilaabitaankiisa, kaas oo loo qorsheeyay 10 Oktoobar.
Samsung Galaxy A20s waxay si rasmi ah uga howlgashaa Hindiya
Taleefanka casriga ee cusub ee Samsung Galaxy A20s oo si hoose u shaqeeya ayaa si rasmi ah uga hawlgalay dalka Hindiya. Ogow qiimaha iyo helitaanka faahfaahinteeda!
DxOMark wuxuu qiimeeyaa kamaradda Asus ZenFone 6 mid kamid ah kuwa ugufiican maanta
DxOMark wuxuu ku dhejiyay labada kamaradood ee wareega Asus ZenFone 6 imtixaanka oo wuxuu u taagay inuu yahay midka ugu fiican suuqa maanta.
Shaandheeyey qiimaha Google Pixel 4
Soo ogow qiimaha afarta nooc ee Google Pixel 4 yeelan doonaan marka ay si rasmi ah suuqa uga bilaabaan waxyar.
Xiaomi waxay ku iibisaa ku dhowaad 4 milyan oo telefoon gudaha Hindiya toddobaad gudihiis
Ka ogow wax badan oo ku saabsan guusha weyn ee Xiaomi toddobaadkan ee Hindiya iyada oo ay ugu mahadcelinayaan laba dallacaad oo waaweyn oo ku saabsan Amazon iyo Flipkart oo gacan ka geysta wadista iibka wanaagsan.
Faahfaahin ka timid sarkaal sare oo ka tirsan shirkadda Xiaomi ayaa tilmaameysa in MI MIX 4 la bilaabi karo sanadkan
Wax yar ka badan laba toddobaad ka hor, Xiaomi Mi MIX Alpha ayaa lagu dhawaaqay, terminal aad u yaab badan oo xambaarsan ...
Pixel 4 wuxuu yeelan doonaa qaab cusub oo lagu kiciyo Kaaliyaha Google
Raadi wax badan oo ku saabsan habka cusub ee ku jiri doona Pixel 4 si aad u awood ugu yeelatid kaaliyaha Google dhexdooda sida horeyba loo shaaciyey.
Xiaomi waxay sanadkaan gudaha Spain ka bilaabi laheyd qaar ka mid ah TV-yada casriga ah
Raadi wax badan oo ku saabsan qorshayaasha sumcadda Shiinaha inay ku soo bandhigaan telefishannadooda ugu horreeya Xiaomi Smart TV-yada Spain ka hor dhammaadka sanadkan.
Samsung waxay xireysaa warshaddii ugu dambeysay ee ay wali ku laheyd Shiinaha
Shirkadda caalamiga ah ee Kuuriya, Samsung, ayaa hadda ku dhawaaqday inay xireyso warshaddii ugu dambeysay ee ay weli ku lahayd Shiinaha.
Qaar ka mid ah Huawei P30 Pro ma dhaafaan shahaadada Google
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa ku andacoonaya in boosteejooyinkooda Huawei P30 Pro ay ku guuldareysteen inay ka gudbaan shahaadada rasmiga ah ee Google oo ah terminaal ku habboon Android
Xiaomi Mi Band 5 oo leh NFC ayaa laga bilaabi karaa adduunka
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan wararka xanta ah ee sheegaya in Xiaomi Mi Band 5 oo la bilaabi doono sanadka soo socda ay lahaan doonto nooc ku saabsan NFC qof walba.
Sawirradii ugu horreeyay ee Motorola oo ay la socoto kamarad iskeed u socota waa la sifeeyay
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshooyinka Motorola ee ah inay si rasmi ah u bilaabaan taleefan kamarad duuban sida sawirrada horay loogu sii daayay.
ASUS ROG Telefoonka 2 wuxuu maraa tijaabada adkeysiga ugu caansan
Waxbadan ka ogow tijaabinta iska caabinta ee ASUS ROG Telefoonka 2 uu si rasmi ah u soo maray isla markaana ay ku guuleysatay inay mar walba dhaafto.
Huawei Mate 30 wuxuu yimid Yurub: Waxaa laga heli karaa Romania
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka Huawei Mate 30 ee Romania si rasmi ah maadaama horay loogu arkay dhowr bog internet oo dalka ku yaal.
Fold Galaxy wuxuu hayaa 119.380 laab illaa shaashadda ay ka jaban tahay
Waxbadan ka ogow tijaabadan cadeysay inta jeer ee shaashadda shaashadda Galaxy Fold u adkeysan karto illaa shaashadda ay ka jaban tahay.
OnePlus 7T wuxuu hagaajinayaa kamaraddeeda cusbooneysiintiisii ​​ugu horreysay
Raadi wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta ugu horreysa ee horay loogu sii daayay OnePlus 7T oo horay u hagaajiyay kamaradda qalabka.
Xiaomi waxay xaqiijineysaa in Redmi Note 8 si caalami ah loo bilaabi doono
Raadi wax badan oo ku saabsan xaqiijinta Xiaomi ee ah in Redmi Note 8 ay si caalami ah u iibgeyn doonto muddo aad u yar.
Moto E6 Plus waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan bilaabista rasmiga ah ee 'Moto E6 Plus' ee Isbanishka maadaama Motorola ay horayba ugu shaacisay boggeeda internetka si rasmi ah.
Huawei waxay diyaarsatay taleefan casri ah oo cusub oo leh shaashad daloolsan waxayna si aamusnaan leh uga diiwaangelineysaa TENAA
Taleefanka casriga ah ee Huawei soo socda oo leh shaashad daloollan ayaa la diyaarinayaa waxaana laga diiwaangeliyey keydka xogta ee TENAA.
Lacagta degdegga ah ee Realme X2 Pro waxay noqon doontaa 50 watts, ma ahan 65 W
Waxaan helnay cusbooneysiin cusub oo ku saabsan mid ka mid ah tilmaamaha ugu muhiimsan ee farsamo ee casriga casriga ah ee 'Realme X2 Pro'.
Sida loo tijaabiyo EMUI 10 beta qof kale kahor
Waxaan kuu sharraxeynaa talaabooyinka la raacayo si aan u awoodno inaan ku rakibno EMUI 10 taleefankaaga Huawei oo aad tijaabiso ka hor qof kale. Runtii waa wax fudud!
Fiidiyowyadan xaday waxay muujinayaan astaamaha ugu wanaagsan ee Google Pixel 4
Daadadka Pixel 4 ma joojinayaan inay soo baxaan. Fiidiyowyadan ugu dambeeyayna waxay na tusayaan qaar ka mid ah astaamaha ugu xiisaha badan.
Redmi 8 horeyba waxay u leedahay taariikh soo bandhigid la xaqiijiyay
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda soo bandhigida rasmiga ah ee Redmi 8 oo horeyba ay u xaqiijisay shirkadda lafteeda oo loo dabaaldego Oktoobar 9.
Galaxy Watch Active 2 waxaa si rasmi ah looga bilaabay dalka Spain
Raadi wax walba oo ku saabsan bilaabista Samsung's Galaxy Watch Active 2 si rasmi ah Spain gudaheeda halkaas oo aan horey uga iibsan karno dukaamada.
Samsung waxay xaqiijineysaa taariikhda daahfurka Galaxy Fold ee Spain
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda rasmiga rasmiga ah ee loo yaqaan 'Galaxy Fold' ee Spain sida horay loogu xaqiijiyay shirkadda Samsung.
Marka waad kicin kartaa tuubbada laba jeer si aad u furto shaashadda Xiaomi
Waxaan ku tusineynaa sida aad ugu habeyn laheyd taleefankaaga shaashadda 'Unlock Xiaomi' adigoo laba jibbaaraya. Si fudud oo runtii shaqeynaya!
Qaar ka mid ah qeexitaannada Micromax iOne Note ayaa la soo daadiyay
Astaamaha iyo qeexitaannada Micromax iOne Note bartamihiisu waa nooc ayaa soo ifbaxday oo muujisay dhowr xaqiiqo oo xiiso leh.
Sifeeyay sifooyinka Infinix Hot S5 oo leh daloolka shaashadda
Astaamaha iyo qeexitaannada khadka dhexe ee dhexdhexaadka ah ee Infinix Hot S5 ayaa si faahfaahsan loo muujiyey waxayna muujinayaan muuqaalka daloolka derbiga.
Google wuxuu soo bandhigi doonaa Pixel Buds Pixel 4
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan Pixel Buds cusub oo Google ay ku soo bandhigi doonto Oktoobar 15 munaasabadda daahfurka Pixel 4 ee New York.
Android Auto hadda wuxuu si aan fiilo lahayn ugu shaqeeyaa taleefannadan Samsung
Soo ogow taleefannada Samsung ee hadda awoodi doona inay isticmaalaan Android Auto bilaa fiilooyin sida horayba loogu sii shaaciyay shabakadda nidaamka hawlgalka.
Android 10 foomkeeda beta-ka ee dadweynaha ayaa hadda loo heli karaa Oppo Reno si ka dhakhso badan sidii la filayay
Oppo waxay sii deysay beta-ka dadweynaha ee 10-ka ah ee loo yaqaan 'ColorOS 6 Lakabka u habeynta' ee loo yaqaan 'Oppo Reno' ka hor intii aan la fileynin.
Realme X2 Pro wuxuu taageero u lahaan doonaa si dhakhso ah loogu soo oogo 65 watts, kan adduunka ugu dhaqsiyaha badan
Realme X2 Pro wuxuu noqon doonaa taleefan casri ah oo lagu qalabeyn doono batteri leh taageero si dhakhso ah loogu xareeyo 65 watts.
Dusha sare: Microsoft ayaa ku sharraxaysa taleefannada gacanta lagu lali karo Android
Waxaan ka helay wax walba oo ku saabsan Surface Duo, taleefanka isku laaban ee ka socda Microsoft ee u adeegsada Android nidaamka qalliinka oo horeyba rasmi u ahaa.
Samsung waxay horeyba uga shaqeyneysaa kiniinka koowaad oo leh 5G
Raadi wax badan oo ku saabsan qorshooyinka Samsung ee ah inay soo saaraan kiniinka ugu horreeya ee 5G, kaas oo noqon doona nooca 6G ee Galaxy Tab S5.
Snapdragon 855 Plus iyo 64MP Quad Camera oo wata 20X Hybrid Zoom ayaa loo xaqiijiyay Realme X2 Pro
Waxaa si rasmi ah loo xaqiijiyey in Realme X2 Pro uu noqon doono mobiil leh Snapdragon 855 Plus iyo 64 MP kamerad afar geesood leh oo leh 20X hybrid zoom.
Xiaomi Mi CC9 Pro oo leh kamarad 108 MP ah ayaa imaan doonta Oktoobar 24
Macluumaad cusub ayaa muujinaya in Xiaomi ay diyaarinayso soosaarida Mi CC9 Pro oo leh kamarad 108 megapixel ah toddobaadyo yar gudahood.
Fold Galaxy wuxuu horey u lahaan lahaa taariikh lagu soo bandhigo Spain
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka Galaxy Fold ee Spain si rasmi ah sida lagu muujiyay joornaalka Orange oo leh taariikh lagu daray.
Shirkadda Sony Xperia 5 ayaa si rasmi ah u timid dalka Spain
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan bilawga rasmiga ah ee Sony Xperia 5 ee Spain sida ay ku dhawaaqday shirkadda lafteeda iyo faahfaahinta daahfurka.
Realme X2 Pro wuxuu yeelan doonaa shaashad 90 Hz ah, waxaana lagu soo bandhigay shaashad
Telefoon cusub oo waxqabad sare leh oo ka socda Realme ayaa imanaya, kaas oo aan ahayn X2 Pro. Tani ...
Huawei Mate 30 taxane ayaa caan ku ah Shiinaha
Huawei's Mate 30 Pro ma noqon karo taleefanka loogu jecel yahay meeraha, laakiin Shiinaha sida muuqata…
Sida loo sii daayo badhanka S Pen ee Samsung Galaxy Note 10
Waxaan kuu soo bandhigi doonaa sida loo daayo S Pen ee Galaxy Note 10 oo markaa aad ugu hesho ficillo badan iyo barnaamijyo saxaafad fudud.
Xusuusin Sharaf ayaa gaari karta suuqa bishan
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan faahfaahinta ugu horreysa ee noo timid ee ku saabsan taleefankan cusub oo ka socda kala duwanaanta 'Honor Note' oo bishaan suuqa soo galaysa.
Huawei wuxuu muujinayaa marka EMUI 10 uu imanayo taleefannada ugu horreeya
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan goorta EMUI 10 ay bilaabi doonto taleefannada ugu horreeya ee Huawei iyo Honor sida horeyba si rasmi ah loogu xaqiijiyay.
Ma jiri doono Xiaomi Mi MIX 4 sida Xiaomi tiri
Raadi wax badan oo ku saabsan xaqiijinta inaanan sugin Xiaomi Mi MIX 4 oo lagu bilaabayo suuqa sanadkan, waa inaan sugnaa 2020.
Motorola RAZR, oo ah qaabka isku laaban ee aan filaynay
Motorola RAZR, oo aan sameynin buuq badan sida Huawei ama Samsung, ayaa wax ka beddeli kara qaabka isku laaban oo leh qaab aad u ficil badan
Xiaomi Mi Band 4 waa ka raqiisan yahay weligiis Amazon!
Ma waxaad raadineysaa jijin waxqabad tayo leh? Hagaag, ka faa'iideyso gorgortan ka yimid Amazon si aad u hesho qiimo jaban Xiaomi Mi Band 4. Kama badna 30 euro.
Haddii aad tahay isticmaaleyaasha YouTube Premium, waxaad ka heli kartaa Google Home Mini oo bilaash ah
In kasta oo ay isku dayo kaladuwan oo ay Google ku beddelayso ku hadlaheeda caqliga u leh wax caadi ah in la arko ...
Kaaliyaha Google ayaa hadda la jaan qaada Xbox-ka
Hadda waxaa suurtagal ah in lagu maareeyo Xbox, ugu yaraan inta badan shaqooyinkeeda iyo barnaamijyadeeda, iyada oo loo marayo amarrada codka iyada oo ay ugu wacan tahay isdhexgalka Kaaliyaha Google
Meizu 16T wuxuu diiwaangelinayaa dhibco bahalnimo ah oo AnTuTu ah mahadnaqa Snapdragon 855 Plus
Heerka AnTuTu wuxuu ka diiwaangaliyay Meizu 16T barnaamijkiisa tijaabada dhibco la yaab leh oo ay maalgaliso Snapdragon 855 Plus.
OPPO waxay bilaabeysaa telefoonada 5G ee jaban sanadka 2020
Raadi wax badan oo ku saabsan qorshayaasha OPPO ee ah in 5G lagu daro taleefoonadooda sanadka soo socda laga bilaabo $ 420 qiima ahaan sida ay horayba u sheegeen.
Trump wuxuu yiri Huawei ma heli doono wax dheeri ah
Raadi wax badan oo ku saabsan hanjabaadaha ka imanaya Mareykanka ee ay ku sheegeen in aysan siin doonin Huawei wax dheeraad ah oo dheeri ah laga bilaabo Nofeembar sanadkan.
Meizu 16T wuxuu gaari lahaa suuqa dhamaadka Oktoobar
Ka ogow wax badan oo ku saabsan imaatinka Meizu 16T ee suuqa oo dhici doona dhammaadka Oktoobar sida horayba loogu ogaa Shiinaha.
Pocophone F2 ayaa imaan kara ka hor dhamaadka sanadka
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan xogta cusub ee muujineysa in Pocophone F2 la bilaabi doono kahor dhammaadka sanadkan suuqa.
Sony waxay u isticmaali doontaa Snapdragon 865 dhamaadka-xiga ee soo socota
Raadi wax badan oo ku saabsan processor-ka ay Sony u adeegsan doonto sanadka soo socda taleefankiisa sare ee soo socda sidaad horayba u baratay.
Huawei Mate 30 wuxuu iibiyaa hal milyan oo unug saddex saacadood gudahood
Ka ogow wax badan oo ku saabsan guusha Huawei Mate 30 ee Shiinaha halkaas oo saddex saacadood oo keliya lagu iibiyay hal milyan oo ka mid ah.
Vivo NEX 3 5G hadda waxaa loo heli karaa horay-amar
Calanka cusub ee Vivo ee aadka u horumarsan, oo ah Nex 3 5G oo leh 12 GB oo RAM ah iyo 256 GB oo ah xusuusta gudaha ah, ayaa hadda loo heli karaa horay loogu sii dalbado Shiinaha.
Huawei waxay rajeyneysaa Mate 30 inuu noqdo kan ugu iibsiga badan
Raadi wax badan oo ku saabsan rajooyinka iibka ee Huawei Mate 30 ee Huawei lafteeda ay leedahay rajo ah inay ku guuleysan doonaan suuqa.
Honor 9X waxaa laga bilaabi lahaa Yurub iyadoo dhowr isbeddel lagu sameeyay
Raadi wax badan oo ku saabsan bilaabista Honor 9X ee Yurub halkaas oo lagu bilaabi doono iyada oo isbedelo taxane ah lagu sameynayo qeexitaankiisa.
Motorola RAZR waxaa la soo bandhigi doonaa dhamaadka sanadka
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan xaqiijinta in Motorola RAZR la doonayo in si rasmi ah loo soo bandhigo kahor dhammaadka sanadka sida horayba loo xaqiijiyay.
OnePlus 7T wuxuu ku duubi doonaa si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah 960 fps ah mahadnaqa mustaqbalka
OnePlus ayaa shaaca ka qaaday in OnePlus 7T uu heli doono cusbooneysiin mustaqbalka ah oo ku dari doonta taageerada duubista fiidiyoowga gaabiska ah ee 960 fps.
Smartisan waxay leedahay dhacdo daah fur ah oo loo qorsheeyay Oktoobar 31: ma soo bandhigi doontaa taleefanka casriga ah "TikTok"?
Munaasabad lagu soo bandhigayo Smartisan ayaa dhici doonta Oktoobar 31, iyo aaladda TikTok ayaa lagu soo bandhigi doonaa halkaas.
Redmi Note 8T waxay ku jiri kartaa horumar hadda
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan suurtagalnimada Redmi Note 8T ee hadda ku jirta horumarka lana bilaabi doono waqti yar sida ay sheegayaan xanta.
Galaxy A70s: Samsung kii ugu horreeyay oo wata kamarad 64 MP ah
Soo ogow qeexitaanka buuxa ee Samsung Galaxy A70s oo horeyba loogu soo bandhigay munaasabad ka dhacday India.
Folding Galaxy Fold ayaa wali si fudud u jabaya
Raadi wax badan oo ku saabsan dhibaatooyinka cusub ee Galaxy Fold sidoo kale wajahayo inkastoo cusbooneysiintiisa, sidaad horeyba u baratay.
Oppo Reno 10X Zoom waxaa horey loo qorsheeyay inuu helo Android 10 bisha Oktoobar
Oppo Reno 10X Zoom wuxuu heli doonaa Android 10 bisha Oktoobar, sida ku cad waxa isla soo saaraha Shiinaha si rasmi ah u shaaciyey.
Shirkadda Huawei waxay ku andacooneysaa inay soo daabuli karto in ka badan 300 milyan oo taleefannada casriga ah sannadkan haddii aysan lahayn xiritaanka Mareykanka.
Haddii aysan jiri lahayn cunaqabateynta Mareykanka ee hadda saaran shirkadda Huawei, rarka moobiilka wuxuu ka badnaan doonaa 300 milyan oo unug sannadkan.
Realme 3 Pro wuxuu helaa cusbooneysiin software cusub oo leh astaamo cusub oo badan
Xidhmo cusub oo firmware ah ayaa u imanaya Realme 3 Pro casriga waxayna ku dareysaa tan horumarin iyo astaamo cusub
HMD Global waxay soo bandhigeysaa taariikhaha Android 10 ee lagu sii daayo Nokia-dhamaadka hoose
Juho Sarvikas oo ah Agaasimaha wax soosaarka HMD Global ayaa shaaca ka qaaday in Nokia 1, 1 Plus iyo 2.1 ay heli doonaan Android 10 sanadka soo socda.
Xaqiijiyay seddex shaqooyin oo ka mid noqon doona Pixel 4
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan astaamaha ugu horreeya ee la xaqiijiyay inay ku jiraan Google Pixel 4 markay suuqa ku dhacaan Oktoobar.
OnePlus 7T hadda waa rasmi, oo leh kamarad gebi ahaanba la cusbooneysiiyay
Dhammaan faahfaahinta OnePlus 7T, astaanta cusub ee soo saaraha Aasiya ee timaada inuu xukumo dilaaga calanka
OnePlus wuxuu xaqiijinayaa jadwalka cusbooneysiinta ee Android 10
Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhaha taleefoonada OnePlus ay marin u heli doonaan cusboonaysiinta Android 10, oo ay xaqiijisay shirkadda lafteeda.
Xaqiijiyay: Huawei Mate X wuxuu imaan doonaa Oktoobar
Ka ogow wax badan oo ku saabsan xaqiijinta in Huawei Mate X uu ku iibin doono Shiinaha bisha Oktoobar iyo Nofeembar adduunka intiisa kale.
Sharp AQUOS zero2: Nooc cusub oo heer sare ah
Ka raadi wax walba oo ku saabsan Sharp AQUOS zero2, taleefanka cusub ee dhamaadka sare leh ee laga helo nooca Japan ee horay loo soo bandhigay.
Shirkadda Xiaomi ee soo socota ayaa duubi karta fiidiyoow iyadoo lagu xallinayo 8K
Way ka cadahay in Xiaomi ay tahay mid ka mid ah shirkadaha ugu casrisan ee hadda leh warshadaha buuxa ee ...
Galaxy S7 wuxuu sii wadaa helitaanka wararka amniga
Dhowr bilood ka hor, shirkadda Kuuriya ayaa ku dhawaaqday in kala duwanaanshaha Galaxy S7 iyo S7 Edge uu joojiyay helitaanka cusboonaysiinta billaha ah ...
Shirkadda Qualcomm ayaa dib u bilawday bixinta qalabyada shirkadda Huawei ee ka reeban xayiraadda Mareykanka.
Horumar cusub, agaasimaha guud ee shirkadda Qualcomm ayaa ku dhawaaqay in shirkadda Mareykanka laga leeyahay ay dib u bilowday iibinta qeybaheeda shirkadda Huawei.
Soo saaraha Shiinaha ayaa laga yaabaa inuu la shaqeeyo Google si uu u soo saaro 'Xiaomi smartwatch' ugu horreeya oo leh nidaamka hawlgalka ee WearOS. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta.
Soo bandhigida Xiaomi Mi MIX Alpha waxay noo ogolaaneysaa inaan helno fikrad ah sida kamaradda Samsung Galaxy S11 ay noqon doonto. Waxaan kuu sheegeynaa faahfaahinta.
Warbixin cusub ayaa soo jeedinaysa in Samsung-ka Kuuriyada Koonfureed ee Samsung ay soo saarayso nooc cusub oo ka jaban noocyada Galaxy Note 10.
Xiaomi wali waxay qorsheyneysaa inay soo bandhigto taleefankeeda isku laabma
Xiaomi waxay sii wadaysaa qorshayaasha ay ku daahfureyso taleefankeeda isku laaban, maaddaama summaddu horay u sheegtay si rasmi ah, laakiin ma jiraan taariikho hadda la joogo.
Galaxy S9 ayaa cusbooneysiin doona Android 10 dhowaan
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta Android 10 oo horeyba isugu diyaarinaya in loo sii daayo Galaxy S9 si dhakhso leh.
Ma batari buurayaa? Maya, waa Xiaomi Mi MIX Alpha ee cajiibka ah
Waxaan si faahfaahsan kuugu tusaynaa sida ay u egtahay saamaynta lacag bixinta ee Xiaomi Mi MIX Alpha. Waxaad la dhacaysaa batarigeeda.
Ku-xigeenkii Galaxy Fold ayaa bilaabi doona adduunka oo dhan
Raadi wax badan oo ku saabsan qorshooyinka Samsung si ay u bilaabaan beddelka Galaxy Fold caalami ahaan bilo yar gudahood sida horay loogu yaqaanay.
Pocophone F1 sidoo kale wuxuu marin u heli doonaa MIUI 11
Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan sii deynta cusboonaysiinta MIUI 11 ee Pocophone F1 oo horeyba shirkadda ay si rasmi ah u xaqiijisay.
Redmi 8A: Noocyada soo gelitaanka cusub ee sumadda
Soo ogow wax walba oo ku saabsan Redmi 8A, taleefanka cusub ee ku dhex jira noocyada laga soo galo ee nooca Shiinaha ee horay loo soo bandhigay.
Oktoobar 1 waxay imaan doontaa nooc cusub oo midab ah oo loo yaqaan 'Honor 9X' oo loo yaqaan 'Holographic Icelandic White'
Oktoobar 1 waxay imaan doontaa nooc cusub oo midab leh oo ah Honor 9X iyo 9X Pro casriga oo loo yaqaan Holographic Icelandic White.
MIUI 11 Taariikhda Rasmiga Rasmiga ah ee lagu shaaciyey Telefoonada badan ee Xiaomi iyo Redmi!
Xiaomi waxay soo bandhigtay MIUI 11 dhowr sheeko oo cusub, halka, isla waqtigaas, ay shaacisay taariikhaha cusboonaysiinta noocyo badan oo ka mid ah.
Tecno Spark 4 waxaa lagu bilaabay shaashad khafiif ah 20: 9 iyo kamarad gadaal seddex geesood ah ah
Telefoon casri ah oo cusub ayaa yimid, waana Tecno Spark 4. Waxaan si faahfaahsan u qeexeynaa dhammaan astaamaheeda iyo qeexitaankiisa farsamo.
The Smart TV Xiaomi Mi Full Screen TV Pro Series lama fileynin, ma mudan tahay in la iibsado?
Dhammaan faahfaahinta cusub ee Xiaomi Mi Full Screen TV Pro Series Smart TV, telefishannada leh Android oo gaari kara Yurub.
Ma rabtaa qiimo jaban Huawei P30 Pro? Hada qiimahiisu waa 675 euro
Ma rabtaa inaad iibsato Huawei P30 Pro raqiis ah? Hagaag hadda waxaad ka heli kartaa Amazon iyada oo qiimo dhimis ku dhow 300 euro. Kama badna 680 euro!
Rasmi: ColorOS 7 wuxuu dhowaan imaan doonaa Oppo Reno 10X Zoom
Madaxweyne ku xigeenka Oppo Shen Yiren ayaa shaaca ka qaaday in Oppo Reno 10x Zoom uu u qalmi doono lakabka midabaynta ColorOS 7 goor dambe.
Galaxy A80 wuxuu maraa tijaabada adkeysiga ugu caansan
Wax badan ka ogow JerryRigEvery baaritaanka adkeysiga ee Galaxy A80 uu si rasmi ah u soo maray waxaanan arki karnaa inuu horey u dhaafay.
Google ma quusato: kani wuxuu noqon doonaa kiniinkaaga PixelBook Go
Xog cusub ayaa laga helay Pixelbook 2, oo ah kiniinka xiga ee Google ee suuqa ku garaaci doona qalab heer sare ah.
Vivo U10: Nooca dhexdhexaadka ah ee astaanta ayaa dib loo cusbooneysiiyay
Ka raadi wax walba oo ku saabsan Vivo U10, taleefanka cusub ee dhex-dhexaadka ah calaamadda Shiinaha ee horay loogu sii daayay dhacdo ka dhacday Hindiya.
Waxaan horey u ogaanay inta ay ku kacayso dayactirka shaashadda Galaxy Fold
Ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan inta lacag ah ee ku kici doonta dayactirka shaashadda Galaxy Fold qaab rasmi ah, sidii horay loogu yiqiin dalka Mareykanka.
Kuwani waa sawirrada rasmiga ah ee la muujiyey ee Oppo Reno Ace, moobilka xiga ee soo socda
Sawirradii rasmiga ahaa ee Oppo Reno Ace ayaa soo baxay oo muujinaya dhammaan bilicdeeda iyo muuqaalkeeda laba nooc oo midabbo ah.
Realme X2 waxaa lagu soo saaray 64 MP oo afar geesood ah, Snapdragon 730G iyo inbadan
Realme X2 waa taleefan cusub oo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah oo leh Qualcomm's Snapdragon 730G oo ah jajab-jajab kaas oo hadda rasmi ah
Samsung Galaxy S10 waxay heshaa shaqooyinka kamaradaha ee Note10 iyo DeX
Waxaad horeyba uheyd DeX oo laga heli karo Galaxy S10, sidoo kale astaamaha cusub ee kamaradaha Note10 oo iyaguna wata qalab cusub.
OPPO A11x: Nooca cusub ee bartamaha u dhexeeya ayaa rasmi ah
Ka raadi wax walba oo ku saabsan OPPO A11x, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee horay loogu soo bandhigay Shiinaha.
Xiaomi Mi MIX Alpha: Moobayl leh shaashad ku dhow 360-degree
Ka raadi wax kasta oo ku saabsan Xiaomi Mi MIX Alpha, dhammaadka-dhamaadka sare ee sumcadda Shiinaha oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay dhacdo ka dhacday Shiinaha.
Soo hel noocyada cusub ee fiilooyinka AUKEY ee leh Dynamic Detect oo aan ugu adeegsan karno taleefannada iyo laptop-yada si aan dhaqso ugu qaadno.
Xiaomi Mi 9 Pro 5G: Dhamaadka ugu sarreeya ee ugu awoodda badan 5G
Ka raadi dhammaan waxyaabaha cusub ee Xiaomi Mi 9 Pro 5G, dhammaadka cusub ee sumadda Shiinaha ee la yimaada 5G waxaana lagu soo bandhigay dhacdo ka dhacday Shiinaha.
Ka ogow wax badan oo ku saabsan bilaabista rasmiga ah ee Nubia Z20 ee Yurub si rasmi ah sida ay xaqiijisay shirkadda lafteeda.
Raadi dhammaan waxyaabaha ku saabsan processor-ka cusub ee Samsung ee dhexdhexaadka ah, Exynos 9611, oo taageero u leh kamaradaha 64MP oo dhowaan soo socda.
Galaxy A20s hadda waa rasmi: Ogow dhammaan qeexitaankiisa
Raadi wax walba oo ku saabsan Galaxy A20s, taleefanka cusub ee Samsung oo horeyba si rasmi ah loo soo bandhigay isla markaana si dhakhso leh looga bilaabi doono suuqa.
Xaqiijiyay: taxanaha Redmi K20 wuxuu heli doonaa MIUI 11 dhowaan
Dhamaadkii Maajo, taxanaha Redmi K20 ayaa u yimid inuu sii joogo. Tani waxay ka kooban tahay qaabka caadiga ah, ee ah ...
Lenovo K10 Plus hadda waa rasmi: ogow astaamaha, qiimaha iyo helitaankiisa
Lenovo K10 Plus ayaa laga bilaabay Hindiya. Waxaan ku tusineynaa wax walba oo casrigaan casriga ah ee dhexdhexaadka ah inuu bixiyo.
Dhamaan dejimaha ay tahay inaad ku hagaajiso talaabooyinkaaga ugu horeeya ee Galaxy Note10 + (iyo Galaxy kale)
Waxaan ku tusineynaa dhammaan goobaha aad u baahan tahay inaad ku xirto Samsung Galaxy Note 10 + si aad uga tagto iyada oo diyaar u ah isticmaalka maalinlaha ah.
Redmi Note 8 Pro waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Ka ogow wax badan oo ku saabsan bilowga rasmiga ah ee Spain ee Redmi Note 8 Pro sida ay xaqiijisay Xiaomi lafteeda munaasabad.
Taleefanka gacanta ee Android ayaa jidka ku jiri kara
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshooyinka lagu furayo taleefan muuqaal leh Android oo ah nidaamka qalliinka ee dhowaan rasmi ahaan doona.